Al Shabaab oo Weerar dad Kirishtaan Kenyaan ah lagu dilay ka fulisay gobolka Lamu.
Thursday January 02, 2020 - 19:28:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa weerar cusub oo khasaara dhaliyay ka fuliyay deegaan katirsan gobolka Lamud ee wadanka Kenya.
Wararka ka imaanaya wadada xiriirisa magaalooyinka Gamba iyo Witu ayaa sheegaya in maanta barqadii saacaddu markii ay ku beegneed Afar Saac uu halkaas ka dhacay weerar lagu beegsaday gaadiid Basas ah.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidamada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarku uu beegsaday Afar gaari Basas ah oo ka yimid Mombaasa kunasii jeeday Laamu, ciidamada 'Mujaahidiinta' ayaa kala saaray dadkii la socday gaadiidka ay gacanta ku dhigeen dadkii muslimiinta ahaa waa lasii daayay halka Afar qof Kirishtaan Kenyaati ah ladilay.
"Mujaahidiinta ayaa weerar ay ka fuliyeen gobolka Lamu waxay ku dileen Afar qof Saliibiyiin Kenyaan ah, weerar kamiin ah ayaa lagu beegsaday Afar gaari Rakaab ah kadibna mujaahidiintu waxay kala saareen dadkii gaadiidka la socday, dadkii muslimiinta ahaa waa loo muxaadareeyay waana lafasaxay halka Afar saliibiyiin Kenyaan ah isla goobta lagu dilay" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Wadada weerarku ka dhacay ayaa ah ah mid halbowle u ah isku socodka gaadiidka gobollada Mombasa iyo Lamu wuxuuna weerarkan waxba kama jiraan ka dhigayaa guulihii ay dowladda Kenya ka sheeganaysay dhulka Lamu ee muslimiinta laga heysto.
Waa weerarkii ugu horreeyay ee xoogaga Al Shabaab ay ka fuliyaan gudaha dalka Kenya tan iyo bilaabashada sanadda 2020-ka.